Imidlalo Yabadlali abaningi engcono kakhulu ye-Android
Inicio » Imidlalo » Imidlalo Yabadlali abaningi engcono kakhulu ye-Android
860 Ukubukwa 0
Ukudlala imidlalo yabadlali abaningi kumaselula anamuhla sekuyintandokazi yokuzijabulisa kwabaningi bethu. Noma nini lapho sinesikhathi samahhala noma sifuna ukuphumula isikhashana futhi sisule amakhanda ethu, sivamise ukuvula imidlalo yethu ye-inthanethi ye-Android esiyintandokazi ukuze siqale ukudlala. Ubani ongazange akwenze?
Nokho, ubumnandi buyanda uma sinethuba lokubhekana nabangane bethu kumageyimu esenzo ahlukahlukene esingawathola kumageyimu e-Android.
Ukudlala abadlali abaningi kuyinto engavamile futhi ekhulayo kumaselula e-Android. Kule minyaka eyisithupha edlule sikwazile ukubona inguquko emangalisayo ngokuvela kwemidlalo enezinga eliyisithombe elijwayelekile lama-consoles.
Imidlalo ongayidlala ku-inthanethi nabangani
Sezivele zavela kakhulu kangangokuthi kunezinketho eziningi zegeyimu ezingadlalwa nabangani ku-inthanethi. Kodwa-ke, phakathi kwezihloko eziningi ezitholakala ezitolo ezihlukahlukene ze-inthanethi, sizokwenza uhlu lwemidlalo engcono kakhulu yabadlali abaningi ukuze kube lula ukukhetha okulungile okuzosenza sibe nesikhathi esihle.
Kunemidlalo eminingi ye-Android yabantu ababili noma ngaphezulu lapho ungaphonsela inselelo abangani bakho noma iqembu eliphambene ndawonye nabangani bakho. Uma ufuna imidlalo engcono kakhulu ye-Android yabadlali abaningi ongawudlala nabangani bakho, nalu uhlu lwethu lwemidlalo esebenza nge-inthanethi enezintambo, i-Wi-Fi noma i-Bluetooth, futhi ingadawunilodeka mahhala ocingweni noma kuthebhulethi yakho ye-Android.
I-Ice Age Village
Lona omunye wemidlalo yokuxhumana nabangani ehlanganisa isifanisi sokwakha lapho inhloso yakho kuwukuvula nokwakhela abalingisi befilimu ye-Ice Age amakhaya amasha.
Kungumdlalo lapho ungeke uthole khona izinkinga eziningi, futhi futhi kunembile, ngoba uma uke wayibona i-movie, uzokwazi bonke abalingiswa.
Uma udlala uxhumeke ku-akhawunti yakho ye-Facebook, uzokwazi ukubona ukwakhiwa okwenziwa abangani bakho, okuzokutholela izinto ezengeziwe ongazisebenzisa endaweni yangakini.
I-Osmos HD ingomunye wemidlalo eminingi ku-Google Play Isitolo engadlalwa ku-inthanethi, futhi imodi yayo yabadlali abaningi ifana ncamashi nomdlalo ojwayelekile, lapho sithatha indima yento encane ewumgomo wayo oyinhloko ukushwabadela abanye uhlobo lwayo. ngokusebenzisa i-osmosis. Kulapho igama laso lisuselwa khona.
Igeyimu ekahle yokuphumula, ejabulisa kakhulu futhi inikeze nokuzizwisa okuhamba phambili kwegeyimu kumadivayisi we-Android.
Ingxenye ebonwayo i-minimalist impela, iyinzuzo yokuthi ihluzo zenziwe kabusha ngaphandle kwezinkinga kumadivayisi we-Android anokucaciswa okuhlukahlukene.
Oda & Chaos Online
Imidlalo yokudlala nabangani ngaphandle kwe-inthanethi
Kungumdlalo we-MMORPG onenani elikhulu labalandeli kanye nezinto eziningi ezingenziwa phakathi nomdlalo. Kungenzeka ukuthi udlale wedwa uma ufuna, nakuba okujabulisa kakhulu imodi yayo yabadlali abaningi ukuyidlala nabangani.
Ngesikhathi sokuthuthukiswa komdlalo ungathola inombolo enkulu yabalingisi, ngaphezu kwenkulungwane ohambweni ongayenza, ukukhwezwa kanye nemijaho efika kwemihlanu ehlukene etholakalayo ukuze uyidlale.
Umdlalo uhlanganisa imodi ye-PVP etholakalayo kanye nemodi yokubambisana, into elindelekile kugeyimu ye-MMO efana nale.
Umdlalo ongawujabulela amahora nezinsuku eziningi, ngakho-ke uzohlangana nezwe elikhulu labalingisi njengoba uthuthukela kule ngxenye yemidlalo eku-inthanethi yamafoni e-Android.
imidlalo engcono kakhulu ye-android 2
Phakathi kwemidlalo yabadlali ababili ye-Android ku-inthanethi sithola i-Ingress, igeyimu ebizwa ngokuthi i-strategic augmented reality, futhi lokho akwenzeki esikrinini esilinganiselwe kuphela, kodwa emhlabeni wangempela.
Ukusebenza kwayo kunikezwa ngokuba khona kwamaphothali emhlabeni wonke, okufanele athathwe noma avikelwe ngohlangothi olukhethiwe: Ukumelana noma Ukukhanyiselwa. Umdlalo uyimpumelelo, kangangoba sekuvulwe umphakathi womhlaba wonke lapho kubuthana khona abalandeli balo mdlalo.
Uzothola izingosi yonke indawo, inqobo nje uma uhlala eduze kwamadolobha namadolobha. I-Ingress izogcwalisa izinsuku zakho ngobumnandi ngokwengeza ukuthi kuzodingeka ushiye indlu yakho uyodlala, okusiza ukwenza umsebenzi womzimba, into efana nomdlalo wePokémon GO.
imidlalo yabadlali abaningi online android
Iqhaza lakho kulo mdlalo wabadlali abaningi ukuzama ukuba umshayeli onekhono emgwaqeni ukuze uthole amaphuzu. Lapha ngeke ube yingxenye yanoma yiluphi uhlanga futhi ngeke kudingeke ushayise ezinye izimoto noma abantu. Umgomo wakho kuphela kuzoba ukushayela kahle imoto yakho ngesivinini esigcwele emgwaqeni omkhulu.
Imodi yabadlali abaningi ayigqamisile njengakweminye imidlalo, njengoba uzokwazi ukufinyelela amabhodi wabaphambili kanye nezimpumelelo. Inhloso enkulu ukuzama ukushaya umdlalo, into engadumaza njengoba uchitha isikhathi esiningi. Ngaphezu kwakho konke ukuzijabulisa okulethayo, lo mdlalo umahhala.
Umjaho we-CSR uphakathi kwezinto ezikhethwa kakhulu uma kuziwa emidlalweni eku-inthanethi ozoyidlala nabangani, eqongelela ukufakwa okungaphezulu kwezigidi ezingu-50 kuze kube manje.
I-CSR Racing ngumdlalo womjaho wezimoto lapho kuzodingeka ulinganise ithalente lakho ngokumelene nobuhlakani bokwenziwa kanye nabanye abadlali abaningi abazofuna ukunqoba, emjahweni wekota yemayela noma uhhafu wemayela.
Lungela ukujabulela umkhankaso obanzi nosheshayo, kanye nakho konke ukuthuthukiswa nokwengeza abathuthukisi abaqhubeka bekwenza ngesibuyekezo ngasinye.
Uma ucwiliswa kumodi yabadlali abaningi kuzofanele uzilinganise nabanye abadlali ku-inthanethi futhi uthole imiklomelo ozokwazi ukuyisebenzisa kamuva kumodi yomkhankaso we-CSR. Okuhle ngalo mdlalo ukuthi uzohlala uthola izimbangi eziku-inthanethi ozozidlala.
AmaPhakade Amaqhawe 2
Imidlalo eku-inthanethi nabangani
I-Eternity Warriors 2 ngomunye umdlalo osebenza ngokufana neDungeon Hunter. Ine-PVP kanye nemodi yabadlali abaningi eku-inthanethi ekuvumela ukuthi uqhudelane ku-inthanethi noma udlale nomngane uma uthanda.
Imifanekiso ingaphezu kwesilinganiso futhi ukusebenza kwegeyimu kuvame ukukalwa kahle futhi kukalwe phezulu phakathi kwabadlali bamageyimu beselula abaningi. Ukuze udlale le geyimu akumele ukhokhe noma yini, njengoba imahhala, nakuba ihlanganisa ukuthenga okuvamile sonke esikwaziyo ngaphakathi kwegeyimu, okungase kukucasule, nakuba kungeyona into ebucayi ngempela.
Ngaphandle kwalokhu, isilinganiso somdlalo sihle kakhulu, ngakho-ke kungaphethwa ngokuthi inketho yokuthenga ngaphakathi kwegeyimu akuyona into elimaza kakhulu umuzwa wegeyimu noma umbono abadlali abanawo ngakho.
Isihogo Somlilo: Ukubizwa
Imidlalo yabadlali abaningi ye-Android
I-HellFire: I-Summoning ingabhekwa njengenhlanganisela ye-Yu-Gi-Oh kanye ne-Magic: The Gathering games.
Kulo mdlalo kufanele usebenzise amakhadi ukuze ubize izidalwa ezihlukahlukene ongazithuthukisa futhi ozozisebenzisa ukuze ungene ekulweni nezinye izidalwa.
Imodi yabadlali abaningi ijwayelekile ukuthi igeyimu yalolu hlobo inganikezwa, ongadlala ngayo ngesikhathi sangempela nabanye abantu.
Nokho, ithimba lokuthuthukisa umdlalo belifuna ukwenza okuthile okuhlukile, linikeze ithuba lokubamba iqhaza emicimbini ebukhoma ukuze lengeze ukukhanya okwengeziwe kugeyimu. Lo mdlalo njengamanje uthandwa kakhulu, ngakho-ke ngeke kube khona ukuphazamiseka okukhulu ukuthola imbangi kalula.
I-Call of Champions wumdlalo lapho wena nabanye ozakwethu ababili beqembu nizobhekana nezimbangi ezintathu empini nasesiphithiphithini esifanayo. Uzobe uhlome nge-Orb of Death move futhi ungayisebenzisa ukucekela phansi imibhoshongo yesitha ngenkathi bezama ukwenza into efanayo kuwe.
Owinile ungowokuqala ukucekela phansi yonke imibhoshongo yesitha. Okufanayo kuthatha imizuzu emihlanu futhi kungadlalwa izikhathi eziningi ngokuthanda kwakho. Kukhona ezinye izinhlamvu ezingavulwa (noma zithengwe ngemali yangempela). Kukhona nendlela ehlakaniphile yama-bots ethatha indawo yabadlali abangabantu abashiya umdlalo, ngakho-ke imidlalo ayipheli. Kuyinto enhle lapho ungalwa ndawonye nabangane bakho kulo mdlalo wabadlali abaningi.
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 1
I-Asphalt 8 ingenye yemidlalo engcono kakhulu yokugijima yezimoto ye-Android. Lo mdlalo unezithombe ezinhle kakhulu nemidlalo yemoto emangalisayo. Ungagijima uzungeze iziteshi namathrekhi ahlukene, uhambe emoyeni, futhi wenze imigilingwane yeqembu.
I-Airborne inikeza imodi yomdlalo wabadlali abaningi nabaphikisi abangafika kwabangu-8. Into engcono kakhulu ukuthi ungadlala lo mdlalo ngokusebenzisa uxhumano lwe-LAN nabangani bakho. Kukhona nezinselelo eziyisipoki lapho abangani bengaphonsela inselelo isikhathi sabo esingcono kakhulu kuthrekhi futhi bajahane nesipoki sakho ngaphandle kokuthi ube lapho. Umdlalo uyatholakala mahhala ku-Google Play.
Clash of kwamaqembu
I-Clash of Clans ngokusobala iyingxenye yalolu hlu ngoba iwumdlalo we-Android wabadlali abaningi ku-inthanethi owine umklomelo ongcono kakhulu ka-2013. Umdlalo wamasu aku-inthanethi wabadlali abaningi okuvumela ukuthi wakhe idolobhana, uphakamise ibutho futhi uhlasele izitha ukuze ulawule. . Izitha zihlala zifakwe ngabanye abantu.
Umdlalo utholakala cishe kumodi yabadlali abaningi kuphela. Ungakwazi ukujoyina imindeni nabangani noma abantu abangahleliwe ukuze nisizane futhi nizohlala nihlasela abanye abantu. I-cross-platform, ngakho iyatholakala naku-iOS.
I-Clash of Clans ibingomunye wemidlalo ye-inthanethi edume kakhulu ye-Android eminyakeni yakamuva futhi isaqhubeka. Umdlalo ugcwele isenzo, ngakho-ke uzochitha amahora, izinsuku nezinyanga uwudlala.
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 10
Uma uthanda imidlalo yamagama, kufanele uzame i-Word Chums. Lo mdlalo wenziwe kahle kakhulu ngemifanekiso ejabulisayo nemisindo, futhi imodi yabadlali abaningi eku-inthanethi ifana nenye, ihlinzeka ngezinhlamvu ezingenziwa ngokwezifiso, isichazamazwi esigcwele, kanye nesithembiso sesikhathi esimnandi nabangane.
Lo mdlalo wakhiwe ngabadlali abangu-3-4 futhi ungadlalwa ngokumelene nabangane bakho, izimbangi zakho ongabazi noma ama-Chumbots.
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 8
Lona umdlalo omluthayo odizayinelwe abalandeli be-basketball, osephenduke omunye wemidlalo yebhasikithi elinganiselwe phezulu nelayishwe kakhulu yabadlali abaningi ku-Google Play. Imifanekiso iyamangalisa ngempela futhi kukhona izindlela zemidlalo lapho ungabonisa khona amakhono akho e-basketball.
Lo mdlalo ugcwele izici eziningi zokwakha ubuntu obuhle, njengabalingiswa, ama-basketball, imifaniswano, kanye nenkundla. Uzothola ibhodi lamaphuzu elikukhombisa izibalo zomdlalo.
Umdlalo unikeza izindlela ezimbili: eyodwa nabadlali abaningi. Abadlali abaningi abaku-inthanethi bakuvumela ukuthi udlale nabangane nabanye abadlali bangempela. Uma ungumuntu othanda i-basketball, ngokuqinisekile uzojabulela ulwazi oluhle lwe-basketball nge-Real Basketball.
I-GT Racing 2: Isipiliyoni Semoto Yangempela
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 4
Umjaho we-GT 2 ungomunye wemidlalo yomjaho ehamba phambili eyakhiwe yi-Gameloft. Ngokufana ne-Asphlat 8, i-GT Racing 2 inikeza amakhulu ezimoto namathrekhi enziwe ngendlela oyifisayo. Kodwa lo mdlalo unamandla amakhulu okungokoqobo, futhi uphindaphindwa emdlalweni ngento eseduze kakhulu namandla angempela.
Ifaka izinguqulo ezingokoqobo ze-3D zezimoto zangempela ezinelayisensi ezingama-71 kumathrekhi angu-13, kanye nesimo sezulu nezinsuku ezihlukene njengoba uhlola amakhono akho, kanye nabadlali abaningi. Kumodi yabadlali abaningi, ungaphonsela inselelo abangani bakho noma abadlali bangempela abavela emhlabeni wonke nge-inthanethi.
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 3
I-Dungeon Hunter 5 isitolimende sesihlanu ochungechungeni lwesenzo oludumile lwe-Gameloft, futhi ingumdlalo wabadlali abaningi. Iza nezithombe ezinhle kakhulu, uchungechunge lwezindaba oluyingqophamlando, kanye nezinhlobonhlobo zezimfihlo nokukhohlisa komshini womdlalo. Njengokulandelana kwakamuva ochungechungeni lwe-Dungeon Hunter, yethula imigodi emisha, amakhono, nezinhlelo zobuciko, kanye nohlelo lokuthuthukisa izikhali.
Ngokungeziwe ku-adventure ye-solo, igeyimu futhi inengxenye edumile yabadlali abaningi eku-inthanethi ehlanganisa imodi yokubambisana lapho ungadlala khona nabanye abantu, imodi ye-PVP ukuze ubhekane nabanye abadlali, futhi kuyenzeka wakhe iqembu futhi uqhudelane empini.
I-Dungeon Hunter 5 ngumdlalo we-MMORPG lapho kufanele uthuthukise umlingiswa ozinikele ekuzingeleni imiklomelo yegolide, athuthuke phakathi kwemishini ehlukene kanye nethuba lokudlala nabanye abantu. Umdlalo wakhiwe ngemishini engaphezu kuka-70, lapho uzocwiliswa khona ezimeni ezahlukene ngenani elikhulu lezinto ongaziphenya futhi uzifune, kanye nemishini okufanele iqedwe ukuze uqhubeke uthuthuka.
Imidlalo ye-inthanethi ye-Android
Igeyimu ekahle yayo yonke iminyaka, futhi ifaka nenguqulo ebonakalayo, esesimweni somdlalo webhodi. Manje futhi iyatholakala ku-Android.
Ngokuyisisekelo, i-Exploding Kittens wumdlalo wamakhadi okulula kakhulu ukuwudlala, lapho impumelelo yomdlali ngamunye izoncika enhlanhleni yabo nethuba, izingxenye ezimbili ezibalulekile kulo mdlalo. Inhloso ukugwema ukuthintwa ikhadi elimnyama, ozoqhuma ngalo bese uqeda ukuhlanganyela kwakho kugeyimu eku-inthanethi yabadlali abaningi.
Ekuqaleni, iphrojekthi yalo mdlalo yanyatheliswa ekhasini le-Kickstarter, lapho ikwazi khona ukuqoqa imali eyanele ukuze ithuthukiswe bese yethulwa, ikhuphule isamba samadola ayi-8.782.571 futhi yazuza irekhodi labaxhasi endaweni yesikhulumi.
Umdlalo wokudubula wesitayela se-arcade obufanele ukuba yingxenye yohlu lwethu lwemidlalo yeselula ozoyidlala nabangani, lapho kufanele ulwe nenqwaba yabaphikisi, okuhlanganisa nabaphathi ababi, uzame ukuthola izikhali futhi unqobe izinjongo ezihlukene ezethulwayo.
Kuzodingeka ungene ekujuleni okumnyama kakhulu lapho uzozithola usemgodini ogcwele izinsongo, kanye nezikhali. Lapho uzothola izikhali ezingaphezu kwekhulu ezilungele ukusetshenziswa ngokumelene nezilo ohlangana nazo ebumnyameni.
Indaba ayinakho ukujula okuningi, ngokuyisisekelo igxile ekutholeni izikhali, ukunqoba izitha kanye nokujabulela zonke izinyathelo zesenzo esinikezwa yile geyimu ukuze sisidlale njengababhangqwana ku-Android. Ukuhlanganisa okukhulu: bakunikeza izikhali ezingenamkhawulo ongazisebenzisa nezikhali zakho.
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 2
I-Blitz Brigade iwumdlalo we-FPS eku-inthanethi wabadlali abaningi (Umuntu Wokuqala Wokudubula) ofana nemidlalo yokudubula ye-PC edumile iThimba Fortress 2 noma i-Battlefield Heroes. Umdlalo uhlanganisa ihluzo ezinemibala ekhathuni ye-3D nomsindo omnandi.
Ku-Blitz Brigade ungabamba iqhaza ezimpini zamahhala eziku-inthanethi zabadlali abaningi nabadlali abangafika kwabayi-12 futhi ukhethe ukuba yingxenye yezigaba ezinhlanu ezihlukene: isosha, udokotela, umdubuli kambayimbayi, sneak kanye ne-marksman.
Ngamunye wabo unemishini eyingqayizivele nezici ezikhethekile, kodwa kufanele uzivule, ngaphandle kokuthi "isosha", eliza onawo kusukela ekuqaleni. Ungasebenzisa izimoto ezi-3 ezihlukene empini futhi ulwe ngezikhali ezinamandla ezingaphezu kwe-100. I-Blitz Brigade iyinkundla yempi ehamba phambili futhi enkulu kunazo zonke ye-android namuhla. Landa i-Blitz Brigade mahhala manje futhi ujabulele umdlalo wokudubula omkhulu kunawo wonke waku-inthanethi wabadlali abaningi kudivayisi yakho ye-Android.
Imidlalo Yabadlali abaningi be-Android: Abadlali abaningi be-Gun Bros
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 5
I-Gun Bros Multiplayer ingumdlalo wokudubula kabili njenge-Contra yakudala. Emdlalweni, kuzodingeka uhambe usuka eplanethini uye kwelinye ukuze ukhulule iplanethi kubahlaseli. Kukhona i-arsenal enkulu yezikhali ongakhetha kuzo futhi umdlalo une-interface emangalisayo.
Njengoba igama liphakamisa, igeyimu yakhelwe ukuthi idlalwe nabanye abadlali. Kukhona futhi inketho yokwengeza umdlali oyintandokazi ohlwini lwabangani bakho ukuze nikwazi ukudlala ndawonye uma nobabili niku-inthanethi.
I-Revolt 2: Abadlali abaningi
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 9
I-Re-Volt 2: Abadlali abaningi ngumdlalo olula womjaho wezimoto ozokwenza ube umlutha. Kuwukwenziwa kabusha kwe-Re-Volt 2 yakudala, ngokwengezwa kwemodi yabadlali abaningi eku-inthanethi. Kulolu hlelo olusha lwe-Re-Volt 2, umdlali angabhekana nabadlali aba-4 kusuka noma yikuphi emhlabeni.
Kunezinhlobo ezimbalwa zezimoto ongakhetha kuzo, ezihlanganisa izimoto ezigijimayo, izimoto zefomula, ngisho namaloli ama-monster. Ungakwazi ukwenza ngokwezifiso zonke lezi zimoto ngokwezidingo zakho.
Phakathi nemijaho, abadlali bangasebenzisa izinhlobo ezahlukene zamandla njengemicibisholo, uwoyela, amabhaluni amanzi, njll. Kukhona 4 game izindlela kanye nezigaba ezingaphezu kuka-264. Esigabeni ngasinye, uzothola izigcawu nemidwebo ehlukene lapho kuzodingeka uqhudelane khona nanoma iyiphi ikhompyutha elawulwayo noma izimbangi ezingabantu.
I-Re-Volt 2: Abadlali abaningi iwumdlalo ovelele wokugijima we-3D onezithombe ezinhle futhi uqinisekile ukuthi uzokugcina ujabulile amahora amaningi.
Amagama Amasha Nabangane
Imidlalo yamahhala eku-inthanethi yabadlali abaningi ye-Android 6
I-New Words With Friends iwumdlalo wamahhala wamagama okuxhumana nabantu owakhiwe nguZynga With Friends (owayekade eyi-Newtoy, Inc.). Kuyafana nomdlalo webhodi we-Scrabble wakudala, lapho kufanele udlale ngokumelene nomphikisi futhi ubeke amagama ebhodini okhethweni lwezinhlamvu eziyi-7 eshalofini lakho.
Abadlali abangafika kwabangu-20 bangadlala ngesikhathi esisodwa ngezaziso zohlelo lokusebenza ukuze bazise abadlali uma kuyithuba labo. Ungamema abangani bakho ukuthi badlale ngaso leso sikhathi nge-Facebook, Twitter noma umdlalo womphikisi ongahleliwe.
Kungumdlalo wokuxoxa, ngakho-ke uma ufuna ukukhuluma nabanye abadlali, ungakwenza lokho ngenketho yokuxoxa.
imidlalo ongayilanda mahhala
I-QuizUp iwumdlalo wemibuzo okuvumela ukuthi uqhudelane nabangane bakho noma abanye abadlali abavela emhlabeni wonke, emidlalweni ehlukahlukene ye-trivia. Ngaphambi komdlalo ngamunye ubhangqwe nomuntu wangempela futhi bobabili babhekana ngqo emqhudelwaneni.
Kunezihloko ezingaphezu kuka-550 ongakhetha kuzo, kusukela kwezobuciko kuye emlandweni, ezemfundo kuye kwezamabhizinisi, ngisho namageyimu kanye ne-Android, ngakho-ke akumele ukhathazeke ngokuphelelwa yimibuzo ukuze uhlole ulwazi lwakho.
Ngaphandle kwesici semibuzo, ungaxoxa ngezihloko zakho ozithandayo ezingosini zomphakathi, ulandele abantu abanezintshisekelo ezifanayo, uzuze izimpumelelo, nokuningi. Uma usungenile emdlalweni futhi uqala ukusebenzisa zonke lezi zici, igeyimu inikeza ulwazi olucebile impela. Kukhona nemenyu yezilungiselelo lapho ungadlala khona ngezinto ezifana nezaziso nemisindo.
I-6 Takes ingumdlalo wamakhadi oyingqayizivele ogqugquzelwe unjiniyela womdlalo webhodi uWolfgang Kramer. Isisekelo silula. Uzonikezwa amakhadi ane-Buffalo Heads kuwo futhi umgomo uwukuthola ama-Buffaloes ambalwa ngangokunokwenzeka ngesikhathi umdlalo uphela.
Isekela abadlali abaningi bendawo kuze kufike kubadlali abane futhi ilungele izingane kanye nabantu abadala beminyaka eminingi. Ibiza u-$1.99 engeningi kodwa ungayizama phakathi nesikhathi sokubuyisela ihora elilodwa ukuze uqiniseke ukuthi uyayithanda!
Isenzo sabadlali abangu-2-4
Imidlalo engcono kakhulu yabadlali abaningi
I-Action For 2-4 Players ingaphambili kancane egameni lohlelo lokusebenza, kodwa okungenani yenza lokho igama layo elikushoyo. Empeleni kuwuchungechunge lwemidlalo emithathu futhi yonke ingadlalwa ngabadlali ababili kuya kwabane bendawo. Kunebhola likanobhutshuzwayo lwethebhulethi lapho ungaba khona iqhaza emdlalweni webhola likanobhutshuzwayo, ukulwa emathangini okuwumdubuli ophansi phezulu, kanye nomjaho wezimoto okuyiyona ndlela ezwakala ngayo.
Azikho zazo ezinhle kakhulu, kodwa ngokuhlanganyela zidala ezinye izinketho ezweni elilambe kakhulu elingaxhunyiwe ku-inthanethi labadlali abaningi. Kumahhala futhi ukuyilanda ngezinketho zokuthenga ngaphakathi nohlelo, ukuze ukwazi ukuyizama ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi imali.
I-BADLAND iyisiteji somkhathi esathatha umhlaba wonke ngesikhathi ikhishwa okokuqala. Imibala yayo ethulisiwe nesitayela esiqondile kusize i-BADLAND ukuthi ibe yingoma ethandwa ngabagxeki. Njengoba kuvela, futhi inemodi yabadlali abaningi engaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ungadlala i-co-op ngendlela efanayo ongadlala ngayo abadlali abaningi be-Super Mario Bros, lapho abadlali beshintshana ngamaleveli. Ungakwazi futhi ukuncintisana ngezinga futhi ubone ukuthi omunye umuntu angakwazi ukuya kude noma ngaphezulu kunawe. Ibuyekezwe izikhathi eziningi kusukela yethulwa ngamaleveli amasha futhi ingazanywa mahhala ngaphambi kokuthenga inguqulo egcwele.
I-Battle Slimes iwumdlalo wamahhala wabadlali abaningi abaku-inthanethi, lapho udlala khona njengama-Slimes amancane ngenkathi uqhudelana nabanye. Ungadlala ngokumelene ne-CPU noma ngabadlali abangafika kwabane endaweni. Idlala njengohlobo lwe-Super Smash Bros elula lapho kufanele ushaye izimbangi zakho.
Ifaka izilawuli zokuthinta okukodwa ezikuvumela ukuthi ugxume ngenkathi umlingiswa wakho ehamba futhi ezishuthela eyedwa. Kumahhala ukudlala ngaphandle kokuthenga okwengeziwe ngaphakathi nohlelo, kulungele izingane, futhi akukubi kangako.
Kwesinye isikhathi kulungile ukubuyela kokwakudala futhi uma uthanda igeyimu ye-chess yakudala, i-Chess Free wuhlelo lokusebenza ongaba nalo. Ihluzo zilula, kodwa i-gameplay iqinile.
Abadlali abaningi abaku-inthanethi bangadlalwa, kanye nenani lemidlalo ye-chess yomdlali oyedwa. Kumahhala ngaphandle kokuthenga ngaphakathi nohlelo futhi kuza namabhodi e-chess ayisishiyagalombili, amasethi ayisikhombisa eziqephu, kanye nenani lezici zokwenza ukuzizwisa kuthakazelise.
I-Edge of the World
I-Edge of the World wumdlalo olingisa ukugoba. Umgomo uwukwethula umkhumbi wakho futhi uwusondeze emaphethelweni omhlaba ngangokunokwenzeka. Noma ungakwazi ukwethula imikhumbi yakho kweminye imikhumbi futhi ngesikhathi esisodwa uthuthukise amathuba akho.
Ifaka abadlali abaningi abangaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ungadlala njengomunye wokaputeni abahlanu, ngamunye enamakhono akhe. Kuhle ukudlulisa umdlalo nomngane futhi kuhle izingane kanye nabantu abadala.
Imidlalo ezodlalwa ku-inthanethi nabangani: Madoda!
Madoda! iyimpi yamakhanda edlalwa ezitolo lapho wena nomunye umuntu oyedwa kufanele niqhudelane ukuze nishaye omunye. Nobabili nidlala umlingisi oyedwa kwababili, ngamunye enamakhono akhe, njengoba nintweza esikrinini nizama ukwehlisa omunye umuntu.
Ivumela abantu ababili ukuthi badlale esikrinini esisodwa ngesikhathi esisodwa futhi lokhu kunconywa kakhulu kubantu abanamathebulethi nakuba idlaleka nakumafoni amakhulu. Kuyashesha futhi kuthukuthele.
I-Glow Hockey 2 ithebula le-hockey yomoya elibonakalayo elinezithombe ze-neon ezimibalabala. Uma uke wadlala umdlalo we-hockey emoyeni empilweni yakho usuvele uyazi ukuthi iGlow Hockey 2 isebenza kanjani.
Ulawula indilinga ye-neon futhi uyisebenzisele ukushaya ibhola lokukhomba eliya kugoli lomunye umuntu ngaphambi kokuthi bakuvimbe. Inabadlali abaningi ngesikhathi esisodwa ngakho idlalwa kahle kakhulu kumathebulethi noma, okungenani, omakhalekhukhwini abakhulu. Ilula kodwa ithwebula ubumnandi bomqhudelwano wehokhi yomoya omuhle.
I-Minecraft ngumdlalo odume kakhulu ongawudlala ekhaya nabangane bakho. Manje ngokwezobuchwepheshe isiyisidlali sabadlali abaningi bendawo, kodwa hhayi abadlali abaningi abangaxhunyiwe ku-inthanethi.
Abangani bakho bazodinga ukuxhuma kurutha yangakini ye-WiFi (asikho isidingo sokuxhuma kuwebhu, ukuxhumana kwerutha kwanele) ukuze wonke umuntu angene kugeyimu yakho.
Kusukela kulo mzuzu uzokwazi ukwakha izinto, izinto ezihlobene nezimayini, ukudlala, nokunye ujabulele. Kuyinto elula, kodwa iMinecraft futhi ikufanele ngempela.
Kungumdlalo ongashi lapho kufanele udale njalo. I-Minecraft yayingomunye wemidlalo ethandwa kakhulu eminyakeni embalwa edlule, futhi isenjalo nanamuhla.
Imidlalo yabadlali abaningi yamahhala
Abaningi bethu bachitha ubusuku obuningi behlezi phambi kwe-TV nabangani bedlala i-NBA Jam ngawo-1990s, futhi manje singaphinda futhi.
I-NBA Jam ibingomunye wemidlalo yokuqala ukusekela ngokusemthethweni i-Android TV futhi abadlali abaningi basendaweni bangadlalwa nge-WiFi yasendaweni (njengeMinecraft) noma nge-Bluetooth uma ungenayo irutha etholakalayo. Igeyimu ejabulisayo edlala ngokushesha nangokukhululekile ngemithetho ye-NBA futhi okuhle kunakho konke, akukho ukuthenga okusha kwangaphakathi nohlelo okudingekayo!
imidlalo yabadlali abaningi eku-inthanethi
I-Mortal Kombat X ngumdlalo oxhumene kuphela nokulwa. Uma ufuna ukudlala igeyimu yokulwa enodlame echitha igazi ngesikhathi sakho esikhululekile, le geyimu kufanele ibe sohlwini lwakho.
I-Mortal Kombat X ekuqaleni yenzelwe ama-consoles kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa yokuduma kwayo, yakhishelwa omakhalekhukhwini. Umdlalo ungowesigaba semidlalo yabadlali abaningi futhi owokudlala ngokumelene nekhompyutha.
Izinhlamvu zisuselwe kubalwi abaziwayo abavela ku-franchise. Ungaphinda uhambe ngamunye ngamunye nabadlali abavela kuwo wonke umhlaba. Kungumdlalo onekhwalithi ephezulu yengcaca ezokwenza ucabange futhi ngeke ukwazi ukuyeka ukuwudlala. Umlingiswa ngamunye unokunyakaziswa okuthile okukhethekile kanye nophawu lokufa nama-X-Rays. Ngakho-ke zilungiselele ukushaya isihogo njengomunye umuntu. Ungalanda leli phekhi legeyimu yabadlali abaningi ku-Google Play Isitolo.
I-Pool Break Pro - Amabhiliyade we-3D
Ukudlala amabhiliyade edijithali bekulokhu kuyinto ejabulisa kakhulu futhi ungakwenza ku-Android nge-Pool Break Pro. Lo mdlalo unikeza ukuhlukahluka okuningi kumabhiliyade akudala, kanye neminye imidlalo yezinti nebhola efana ne-Carrom, i-Crokinole ne-Snooker.
Sekukonke, kunemidlalo ecishe ibe ngamashumi amabili nambili ehlukene okufanele idlalwe. Isekela i-pass-and-play yabadlali abaningi ukuze ujike bese omunye umuntu ethatha idivayisi futhi athathe ithuba lakho. Futhi abadlali abaningi abaku-inthanethi ukuze ukwazi ukuphonsela inselelo abanye noma uwedwa. Umdlalo oqinile ngempela ngentengo ephansi ngempela.
I-Sea Battle ihlukile komdlalo wakudala we-Sea Battle noma webhodi le-Battleship board. Njengoba ungacabanga, lokho kusho ukuthi kulula kakhulu ukufunda futhi kuhle ezinganeni nakubantu abadala.
Imidwebo idwetshwe ngesandla okuthinta kahle futhi kukhona okuhlukile namathuluzi amasha ukwenza umdlalo uthakazelise futhi uhluke kowokuqala, umkhumbi wezempi. Ungasebenzisa isitayela sokudlula nokudlala sabadlali abaningi uma unedivayisi eyodwa kuphela noma uxhume nge-Bluetooth futhi udlale ngaleyo ndlela. Ngaphezu kwalokho, kumahhala ngokuphelele.
I-Spaceteam ngumdlalo webhodi ofana noSimon Says. Uma sekuyithuba lakho, kufanele usho into ehlekisayo nesayensi-mbumbulu ukuze uchaze isenzo okufanele sithathwe ngabantu. Kukhona ukudayela nokushintsha ocingweni futhi kungase kudingeke ukuthi usebenzise izinto ezifana ne-gyroscope.
Wonke umuntu kugeyimu kufanele abe nemishini yakhe ye-Android ne-Apple futhi axhumeke kunethiwekhi efanayo ye-WiFi (ayikho iwebhu edingekayo, kodwa ukufinyelela kumzila). Ulahlekelwa igeyimu nakanjani lapho umkhumbi wakho uqhuma.
Izikelemu 2: I-Armageddon
I-Worms ngumdlalo wakudala lapho ulwa nesitha ukuze ubulale zonke izikelemu zaso ngaphambi kokuba zithole ithuba lokubulala ezakho. Kukhona amathani ezikhali ezihlekisayo, amasu, nokunye okuningi okwenzeka emazingeni anemibala.
Umdlalo ojabulisayo onothegi wamanani aphansi, futhi vele ungabadlali abaningi bendawo abasebenzisa indlela yokudlula nokudlala. Emazingeni aphezulu wabadlali abaningi, kuningi okumele ukwenze ukuze idola lakho lingamoshi ngalo mdlalo.
I-Modern Combat 5: I-Blackout ingenye yemidlalo engcono kakhulu yesitayela sokudubula yomuntu wokuqala. Iyingxenye ye-"Modern Combat Series", isitolimende sesihlanu sochungechunge lomdlalo. Sezivele zilayishwe izikhathi ezingaba yizigidi ezingu-50 ngabasebenzisi.
Lo mdlalo uzokwenza ukuthi uthole injabulo ye-Call of Duty kanye nesasasa Lenkundla Yempi. Ingenye yemidlalo emangalisayo kakhulu; isici somdlalo wabadlali abaningi abaku-inthanethi naso siyamangaza.
Ungakwazi ukuhlangana nabangani bakho ukuze nimelene neqembu lesitha. Umdlalo unamaqhinga kakhulu futhi kuzodingeka ubeke phansi amaqhinga akho empi. Amabhomu, amabhomu neziqhumane kubalulekile. Ungakwazi futhi ukuxoxa neqembu lakho nabanye abadlali kungxoxo ye-Global ne-Squad. Umdlalo ushubile futhi uyalutha. Ungalanda lo mdlalo ku-Google Play Isitolo.
I-BombSquad iwumdlalo ojabulisayo waku-inthanethi wabadlali abaningi lapho usebenzisa amabhomu ukuqhumisa abangani bakho. Ngezinguqulo zamahhala ze-Android, umdlalo usikhumbuza i-Bomberman, kodwa ngezithombe ezihlaba umxhwele ze-3D futhi ngaphandle kwama-maze ayinkimbinkimbi noma imiyalo. Ngokungajwayelekile, i-BombSquad ivusa intshisekelo yanoma yimuphi umdlali ngobulula bayo futhi igxile kubadlali abaningi.
Umdlalo unemodi yomkhankaso, edingekayo ukuze uwine 'amathikithi' ukuze ukwazi ukudlala ku-inthanethi ngokumelene nabanye abadlali. Kumodi yomkhankaso, kuzodingeka usinde kumagagasi ambalwa ezitha alawulwa umdlalo.
Imiyalo ilula: ohlangothini lwesobunxele lwesikrini, isilawuli sedrayivu yezinhlamvu. Ngakwesokudla, kunezinkinobho ezine ezisetshenziswa ngokulandelana kwazo: ukubhoboza, ukuthatha okuthile, ukuphonsa ibhomu noma ukugxuma. Kunezinhlobo eziningana zamabhomu futhi angathathwa kuphela phakathi nomdlalo.
Isiphakamiso esilula silungele ukudlala eqenjini nabangani. I-BombSquad igqamile ngokungadingi imodi eku-inthanethi. Ungadlala nabangani bakho, kodwa ngaphandle kwe-inthanethi. Kuzomele nje ufake imodi ye-Wifi yomdlalo ukuze "ubambe" igeyimu. Ngokunokwenzeka kwabadlali abayisi-8 kumdlalo ofanayo, iBombSquad iwumdlalo onconyiwe wabathandi bokuzijabulisa kwabadlali abaningi.
Imidlalo ozoyidlala nabangani be-Android
Ukudlala imidlalo yevidiyo ku-inthanethi kuyindlela engcono kakhulu yokudlala yabadlali abaningi. Unethuba lokudlala nabantu abavela emhlabeni wonke cishe nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Nokho, akuwona wonke umuntu onoxhumano lwewebhu oluqinile ngaso sonke isikhathi, futhi ngezinye izikhathi ufuna nje ukudlala nabantu abahlezi eduze kwakho esikhundleni sabantu abakwelinye izwe. Uma lokho kuzwakala njengokuthile okufunayo, nansi imidlalo engcono kakhulu yasendaweni yabadlali abaningi ye-Android.
Uma ucabanga ukuthi noma yimiphi imidlalo yasendaweni yabadlali abaningi ye-Android engekho kulolu hlu, ungazise kumazwana ukuze ngikwazi ukuwangeza kulokhu kukhetha okukhulu.
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokubuka Iziteshi ze-TV nama-movie abukhoma
I-Snapdragon 8+ Gen 1 iyi-chip ye-Qualcomm enamandla kakhulu
I-Etiquetas: androidimidlalo yabadlali abaningi
I-Diablo Immortal: Ungayilanda kanjani kusengaphambili ku-PC
Yiziphi izesekeli ezibalulekile zomdlali wegeyimu?
Ungakhohlwa ukwazi imidlalo yevidiyo engcono kakhulu yonyaka
I-No Man's Sky ithola i-Leviathan Expedition, ukunwetshwa kwayo kwamahhala kwesikhombisa